Top 5 Tinh dầu dưỡng tóc nào tốt nhất hiện nay được tin dùng | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 Tinh dầu dưỡng tóc nào tốt nhất hiện nay được tin dùng | Muasalebang in Muasalebang
Ukusebenzisa i-shampoo ne-conditioner akukwazi ukunakekela izinwele zakho ngaphakathi, akukwazi ukuletha ukondleka kwezinwele zesikhathi eside, ikakhulukazi ngezinwele ezomile, ezilimele. Ngalesi sikhathi, uzodinga isixazululo esibanzi amafutha ezinwele. Ngakho-ke yimaphi amafutha abalulekile njengamanje akalwe njengangcono kakhulu ezinweleni zakho? Ake sithole ngesihloko esingezansi.
1 Ayini amafutha ezinwele?
2 Umphumela wamafutha abalulekile okunakekelwa kwezinwele
3 Imibandela yokukhetha uwoyela wezinwele ofanele
3.1 Khetha uwoyela obalulekile ngokusekelwe ebukhulu bezinwele zakho
3.2 Khetha i-conditioner yezinwele ngokusekelwe kwikhwalithi yezinwele zakho
3.3 Khetha amafutha ezinwele ngokusekelwe ephunga lomkhiqizo
4 Top 5 best izinwele amafutha asebenzayo
4.1 1. Ukwelashwa kwe-Moroccanoil
4.2 2. I-Tresememe Keratin Amafutha Ezinwele Ezibushelelezi
4.3 3. I-Garnier Argan Botanic Therapy I-Ultra Doux Hair Oil
4.4 4. I-Nashi Argan Hair Oil
4.5 5. I-OGX Ivuselela Amafutha E-Argan Yase-Morocco Amafutha Angena Kakhudlwana Owomile Nezinwele Ezimahhadla
5 Amanothi lapho usebenzisa amafutha abalulekile ezinwele
Ayini amafutha ezinwele?
Amafutha ezinwele iwumugqa womkhiqizo osiza ekunakekeleni, ekwelapheni nasekuthuthukiseni izinwele zakho, okusiza ukuzondla ukuze zibe namandla kakhulu. Kodwa-ke, uma kuqhathaniswa ne-conditioning creams kanye nezifutho zezinwele, ama-conditioners anamandla okungena ngokujulile emigqeni yezinwele, okusiza ukufeza imiphumela engcono yokunakekelwa kwezinwele.
Amafutha amaningi abalulekile ezinwele namuhla azohlinzeka ngama-acid amaningi anamafutha kanye nomswakama ofanelekile ukunxephezela amafutha alahlekile ezinweleni, ngaleyo ndlela esiza ukunciphisa ukoma, ukuphuka kanye nokuntuleka kwezinwele.
Njengamanje, lawa mafutha abalulekile akhishwa ngokuphelele emakhambi emvelo futhi awaqukethe amakhemikhali ayingozi. Ngakho-ke, ukusebenzisa lo mkhiqizo kuzokwenza uzizwe uvikelekile ngokuphelele, ngaphandle kokukhathazeka ngokuthi izinwele zakho nekhanda lakho lizolimaza.
Umphumela wamafutha abalulekile okunakekelwa kwezinwele
Sebenzisa izinhlobo amafutha ezinwele Iletha izinzuzo eziningi ezinhle ezinweleni zakho. Okokuqala, lo mkhiqizo uzokondla izinwele zakho, ulungise ngokuphumelelayo okonakele, ukulahlekelwa izinwele kanye nezinwele ezincane, ukhuthaze izinwele ukuba zikhule ngokushesha futhi zibe nempilo.
Akukhona lokho kuphela, la mafutha anomsoco angaphinde avikele isikhumba sakho sekhanda ezintweni ezimbi zansuku zonke ezifana nokungcoliswa kwemvelo, ilanga, umoya noma ukungcola. Akukhona lokho kuphela, lo mkhiqizo ungabuye ugcine izinwele endaweni kalula futhi zicwebezele, ikakhulukazi ngezinwele ezisanda kufakwa.
Ngaphandle kwalokho, ukusebenzisa la mafutha abalulekile kungavikela izinwele zakho ekushiseni kwamakhemikhali lapho udaya, usomisa, njll., kusiza ukulungisa umonakalo nokulinganisa kabusha, kunxephezela ama-acids anamafutha futhi umswakama ulahlekile ezinweleni zakho.
Imibandela yokukhetha uwoyela wezinwele ofanele
Uhlobo ngalunye amafutha ezinwele ezahlukene izinwele ngamunye ngamunye. Ngakho-ke, ukukhetha amafutha abalulekile afaneleka kakhulu ezinwele zakho, udinga ukusekelwe kulezi zindlela ezilandelayo:
Khetha uwoyela obalulekile ngokusekelwe ebukhulu bezinwele zakho
Ngezinwele eziqinile, eziqinile kodwa okunzima ukuzibeka, kufanele kunikezwe kuqala ukukhetha i-conditioner enomswakama ophezulu nge-dense, ukuthungwa okusindayo ukudala ukukhanya kwezinwele, okwenza kube lula ukwenza isitayela nokuphatha.
Kodwa-ke, ngezinwele ezincane nezincane, kuhle ukuthi kube nokuthungwa okuncane, okukhanyayo kanye nezakhi eziningi zokukhuthaza ukukhula kwezinwele.
Khetha i-conditioner yezinwele ngokusekelwe kwikhwalithi yezinwele zakho
Ngezinwele ezihlukene, ukukhetha amafutha ezinwele Kukhona futhi umehluko. Isibonelo, ngezinwele ezinamafutha ezivame ukunamathela futhi ezivame ukungcola, kunconywa ukusebenzisa amafutha okulawula uwoyela kanye nemikhiqizo enekhono elilinganiselwe lokuthambisa.
Ngezinwele ezomile, ezipholile, ezingenakuphila, kufanele ukhethe uhlobo olunekhono eliphezulu lokuthambisa, elingakwazi ukondla izinwele kusuka ekujuleni kwangaphakathi. Ngaphezu kwalokho, ngezinwele ezonakalisiwe, kufanele ukhethe uhlobo oluqukethe i-Macadamia namafutha e-almond ukuze uthole ukunakekelwa kwezinwele okungcono kakhulu.
Phakathi naleso sikhathi, ngezinwele ezidayiwe, kufanele ukhethe umugqa wemikhiqizo ngokukhethekile yalezi zinwele ezinezithako ezijwayelekile ezifana nejojoba, i-Argan noma i-almond.
Khetha amafutha ezinwele ngokusekelwe ephunga lomkhiqizo
Umuntu ngamunye uzoba nokunambitheka kwakhe ngamakha. Ngakho-ke, lapho ukhetha i-balm, udinga futhi ukunaka iphunga labo ukuze ubone ukuthi liyakufanela yini noma cha.
Top 5 best izinwele amafutha asebenzayo
Kunemigqa eminingi emakethe namuhla amafutha ezinwele umehluko. Kodwa-ke, ukukhuluma ngemigqa yomkhiqizo engcono kakhulu, ukuze uthole imiphumela engcono kakhulu yokondla kanye nokunakekelwa kwezinwele, akunakwenzeka nakanjani ukungazinaki imikhiqizo engu-5 ephezulu ngezansi.
1. Ukwelashwa kwe-Moroccanoil
Ukwelashwa kwe-Moroccanoil kungenye yamafutha abalulekile athandwa kakhulu ekwelapheni izinwele namuhla. Lo mkhiqizo unesixazululo esinomsoco esifakwe ebhodleleni lengilazi eliwugqinsi futhi eliqinile eliphuzi ngokunsundu. Ngaphezu kwalokho, ibhodlela elinomsoco liphinde lenziwe nge-screw cap yepulasitiki kanye nekhanda lepompo elihlakaniphile kakhulu, okwenza kube lula ukuthola imisoco ngaphakathi.
Lo mugqa wamafutha ezinwele unokuthungwa kwegolide elimnyama, i-iridescent futhi unephunga elikhethekile elivela kumafutha e-Argan, ukukhanya, okumnandi futhi kumnandi kakhulu. Le essence ilula impela futhi kulula kakhulu ukungena ijule ezinweleni zakho, ngokuphelele ngaphandle kokubangela ubunzima noma ukunamathela ezinweleni.
Izithako eziyinhloko kulo mugqa wamafutha onomsoco ngamafutha e-argan kanye nobisi olukhishwe, amafutha ezinhlanzi. Lezi zakhi zibhekwa njengezinhle kakhulu ekunakekelweni kwezinwele, zisiza ukondla izinwele zakho ukuze zibe namandla kusukela ekujuleni.
Akukhona lokho kuphela, Ukwelashwa kwe-Moroccanoil kuphinde kwengezwe nge-Cyclomethicone ne-Dimethicone. Lezi yizithako ezisebenzayo ezingakha ifilimu ehlanganisa i-shaft yezinwele, ivikele ngokuphumelelayo izinwele emathonyeni angaphandle. Akukhona lokho kuphela, lezi zakhi zomsoco zingaletha nokushelela emucu wezinwele zakho.
Lo mugqa wamafutha unezinguqulo ezi-2, ezifanele izimo zezinwele ezi-2 ezihlukene. Lapho i-Moroccanoil Treatment Original ingumugqa wokuqala ofanele zonke izinhlobo zezinwele futhi i-Moroccanoil Treatment Light ikhethekile ngezinwele ezinemibala ekhanyayo.
Lo mkhiqizo uzosiza izinwele zakho ukuthi zibuyiselwe ngokubonakalayo ngemuva kwamaviki angama-2-3 kuphela wokusetshenziswa. Kodwa-ke, udinga ukuqaphela ukuthi ungawavumeli lamafutha ukuthi anamathele esikhumbeni ukuze ugweme ukuwenza abe namafutha noma anamathele.
Intengo yesithenjwa: 760,000 VND / 100ml ibhodlela – 1,180,000 VND / 200ml ibhodlela.
2. I-Tresememe Keratin Amafutha Ezinwele Ezibushelelezi
I-Tresememe Keratin Smooth nayo ingumugqa amafutha ezinwele umthengisi best wamanje. Lo mkhiqizo wenziwe ngokuphelele ngamafutha abalulekile emvelo, esiza ukondla nokunakekela izinwele zakho ngokuphelele kusuka ngaphakathi nangaphandle.
Lo mugqa wamafutha unobumba obukhulu futhi obukhulu kodwa kulula kakhulu ukungena ekujuleni kwezinwele zezinwele, okusiza ukubuyisela umonakalo kusuka ekujuleni ngaphakathi. Umphumela olethwa yile serum yezinwele uhluke kakhulu, ungasiza kokubili izinwele zakho ukuthi zihlale endaweni futhi zondle izinwele zakho ukuze zibe bushelelezi futhi zithambe. Akukhona lokho kuphela, lo mkhiqizo unganciphisa nokuqhekeka kwezinwele zakho.
I-Tresememe Keratin Smooth inephunga elimnandi kakhulu, njengeswidi elimnandi. Akukhona lokho kuphela, lo mkhiqizo futhi awuzenzi izandla zakho zizizwe zinamafutha ngemva kokusetshenziswa ngakunye.
Intengo yesithenjwa: 139,000 VND / 97ml ibhodlela.
3. I-Garnier Argan Botanic Therapy I-Ultra Doux Hair Oil
I-Garnier Argan Botanic Therapy I-Ultra Doux nayo iphakathi kwamafutha ezinwele ayi-5 athandwa kakhulu namuhla. Lo mkhiqizo unezithako eziyinhloko zamafutha e-Argan kanye ne-Camellia flower extract. Lezi zithako zicebile ngama-acids angasetshenzisiwe kanye namavithamini A, E, F, ama-antioxidants kanye nezakhamzimba ezikhethekile zokuthambisa izinwele.
Ngenxa yohlu lwezithako ezishiwo ngenhla, lo mugqa wokunakekelwa kwezinwele unikeza umphumela obanzi kakhulu ezinweleni zakho. Ngokuqondile, lo mkhiqizo uzosiza ukuthambisa izinwele zakho, ngaleyo ndlela usize ukunciphisa ukoma nokuphuka kwezinwele zakho.
Akukhona lokho kuphela, kodwa i-Garnier Argan Botanic Therapy Ultra Doux nayo iphumelela kakhulu ekugcineni amandla ezinwele zakho izinsuku ezi-2 ezilandelanayo. Ngaphandle kwalokho, lo mugqa wamafutha ezinwele nawo unikeza isivikelo esihle kakhulu ezintweni eziyingozi zemvelo njengemisebe ye-UV, ukukhanya kwelanga noma uthuli, ukungcola.
Lesi sithako sezinwele se-Garnier Argan Botanic Therapy Ultra Doux silungele izinwele ezilimele neziqinile.
Intengo yesithenjwa: 220,000 VND / 150ml ibhodlela.
4. I-Nashi Argan Hair Oil
I-Nashi Argan ingumkhiqizo wokunakekelwa kwezinwele onamandla ovela e-Italy. Lo mkhiqizo ngokuyinhloko wakhiwe ngamafutha e-argan kanye ne-Dimethicone. Ngenxa yalokho, izinwele zakho zizokwengezwa ngamavithamini amaningi afana namavithamini A, E, F kanye nama-unsaturated fatty acids … ngokunakekelwa okuhle kakhulu kwezinwele nomphumela wokubuyisela.
Ngokuqondile, ukusebenzisa lesi simonyo sezinwele ze-Nashi kuzosiza ukubuyisela kahle isimo esilimele sezinwele zakho, usize ukuthambisa ukuze unciphise ukoma, futhi uhlukanise iziphetho zezinwele zakho. Akukhona lokho kuphela, lawa mafutha e-Nashi Argan nawo angashukumisa izinwele zakho ukuba zikhule ngokushesha, zibe zinde, zenze izinwele zibe mkhulu.
Ngokufanayo ne-Garnier hair conditioner engenhla, lesi simo se-Italian sibuye sifaneleke kakhulu kulabo ababhekene ne-frizzy, iziphetho ezihlukene kanye nezinwele ezilimele.
Intengo yesithenjwa: 250,000 VND / 30ml ibhodlela – 550,000 VND / 100ml ibhodlela.
5. I-OGX Ivuselela Amafutha E-Argan Yase-Morocco Amafutha Angena Kakhudlwana Owomile Nezinwele Ezimahhadla
I-OGX Evuselela I-Argan Amafutha YaseMorocco Engeziwe Angena Kawoyela Ewomile & Nezinwele Eziqinile futhi iwumugqa wokunakekela izinwele ofanele amantombazane anezinwele ezomile, eziqinile nezilimele. Izithako zalo mugqa we-essence zisuka kuwoyela we-Argan okhishwe eMorocco, okuyivelakancane kakhulu futhi ewusizo.
Lokhu kungenxa yokuthi lamafutha abalulekile aqukethe inani elicebile kakhulu likavithamini E. Ngaphandle kwalokho, uwoyela we-Argan ovela eMorocco uqukethe nezinye izakhi eziningi ezibalulekile nezidingekayo zezinwele zakho. Ngakho-ke, ukusebenzisa lo mugqa wamafutha kuzoletha umphumela omuhle kakhulu ekondleni nasekubuyiseleni izinwele ezonakele, kusiza izinwele zakho ukuba zithuthukise ngempumelelo ukoma, ukuphuka, kanye neziphetho ezihlukene. …
Akukhona lokho kuphela, lawa mafutha abalulekile angabuye akhuthaze izinwele ukuba zikhule ngokushesha, zibe namandla futhi ziqine. Ngaphandle kwalokho, ngalo mkhiqizo, isikhumba sakho sekhanda siphinde sigcwaliswe ngomswakama odingekayo ukuze sibe nempilo ngokumelene nama-agent amabi avela endaweni ezungezile.
Le OGX Evuselela I-Argan Oil Of Morocco Extra Penetrating Oil Dry & Coarse Hair inombala ophuzi, okhanyayo onephunga elilula. Leli phunga alinamandla kodwa linamandla okuhlala ezinweleni zakho isikhathi eside, liletha ukuthamba, ukukhanga nokugqamisa kumuntu ongumnikazi wazo.
Intengo yesithenjwa: 250,000 VND / 100ml ibhodlela
Amanothi lapho usebenzisa amafutha abalulekile ezinwele
Amafutha ezinwele kuletha izinzuzo eziningi ezinhle ekunakekeleni izinwele zakho ukuba ziqine, ziqine futhi zicwebezele. Kodwa-ke, ohlelweni lokusebenzisa lo mugqa womkhiqizo, kunamanothi ambalwa abalulekile okudingeka ukwazi, ikakhulukazi ngale ndlela elandelayo:
Kudingekile ukukhetha umkhiqizo ofanele wesimo samanje sezinwele ezonakalisiwe ukuze uqinisekise ukuthi ungalungiswa ngempumelelo futhi ngokushesha.
Ungasebenzisi la mafutha abalulekile izikhathi eziningi, imvamisa evamile yokusetshenziswa kwanele izikhathi ezingu-1-2 ngesonto. Ukusebenzisa kakhulu kuzokwenza izinwele zinamathele futhi kunikeza izinwele isikhathi esanele sokumunca izakhi futhi zivuselele ukukhula okusha.
Sebenzisa amafutha abalulekile ngenkathi izinwele zisamanzi.
Nazi eziphezulu ezingu-5 amafutha ezinwele aziwa kakhulu njengamanje. Ngethemba, ngokusebenzisa lesi sihloko esingezansi, uzozikhethela umugqa womkhiqizo ofaneleka kakhulu, okusiza ukuthi unakekele izinwele zakho ngokuphumelelayo kusukela ngaphakathi nangaphandle, kusukela empandeni kuya phezulu, wenze izinwele zakho ziqine futhi zibe nempilo.
Bột kem béo pha trà sữa loại nào ngon? Cách tự pha như ngoài hàng | Muasalebang